Na-eje ije n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe - Yangzhou qiangjing egwuregwu egwuregwu Co., Ltd.
Nleta nke ihe dị oke mkpa
Factorylọ ọrụ anyị na-azụta akwa ndị na-echebe egwuregwu. Teknụzụ ahụ ga-enwe ihe dị iche iche chọrọ maka ichebe ndị na-echebe ya dịka egwuregwu dị iche iche. A na - ahọrọ ya dịka ọnọdụ nke ndị na - echebe ya na nkwonkwo na akwara. A choro onye zụrụ ya iji zụta akara nke ọma.
Enwere ụdị ihe nchebe atọ dị na ụlọ ọrụ anyị: ndị na-echebe onwe ya, ndị na-echebe rọba NEOPRENE, ndị na-enye mkpuchi na-agbanwe agbanwe.
Nkịtị na-echebe ụlọ / mgbatị egwuregwu
Ihe a na –eme bụ akwa yarn ma ọ bụ nke a gwakọtara ọnụ, nke a na-eji igwe na-eke okirikiri, ma kechie ya. Ngwa nchebe ejiri kechikwa mma dabara adaba maka ihe nchebe egwuregwu iji mee ka nkwonkwo ahụ dị ọkụ.
Egwuregwu mgbatị siri ike
NEOPRENE bụ ezigbo ihe nchekwa. Thekwà ahụ nwere ezigbo ikike ọfụma na ezigbo iku ume. Ọ nwere ike inye ezigbo nrụgide na nkwonkwo na akwara akwara. Ọ nwere arụmọrụ nchebe dị mma ma dabara adaba maka egwuregwu dị egwu.
Ngwá ọrụ kachasị mma maka egwuregwu dị n'èzí
A na-eji akwa polyester owu na eriri roba mee ihe nchebe ahụ, a na-egbunye ya n'ogologo dị iche iche dabere na mkpa nke akụkụ ahụ dị iche iche chọrọ. A na-eji mkpọchi mkpuchi na eriri anwansi iji dozie onye na-echebe ya.
Ihe nchebe a dị mfe ịnya ikuku, nwere ike idozi nrụgide ahụ kpamkpam, yana ikuku zuru oke. Enwere ike iji ya dị ka ihe na-echebe egwuregwu ma ọ bụ dịka bandeeji ihe mberede. Ezigbo akụrụngwa maka egwuregwu dị door
Ulo oru nyocha
Ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ anyị na-achịkwa nke ọma dịka ụkpụrụ European na American si dị, ha kwekọrịtara n'ụkpụrụ nchebe egwuregwu mba ụwa.
Ihe isi na-echebe egwuregwu egwuregwu: akwa, nkwoji aka, aka, ikpere na ikpere na ngwa nchebe ndị ọzọ: enweghi ihe mgbu, ogologo oge, mpaghara nchebe, ike mgbanwe, ike mmetụta, ike mmetụta / arụmọrụ, ngwaahịa nchebe egwuregwu CE, akara akara / akara ịdọ aka ná ntị. / Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ...
A na-enyocha ngwaahịa niile dị na ime ụlọ Samplely ọzọ mgbe ị na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ.